गैर मधुमेह हाइपोग्लाइसीमिया: तपाईलाई मधुमेह बिना हाईपोग्लाइसीमिया छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी खेलहरु चेकआउट औषधि बनाम मित्र प्रेस
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के हाइपोग्लाइसीमिया मधुमेह बिना हुन सक्छ?
के हाइपोग्लाइसीमिया मधुमेह बिना हुन सक्छ?
हाइपोग्लाइसीमिया देखा पर्दछ जब तपाईको रगत चिनी हुनु पर्ने भन्दा कम हुन्छ - कहिलेकाँही यसलाई कम रगतमा चिनी पनि भनिन्छ। रगतमा चिनी (उर्फ) को लागी यो सामान्य हो रगत ग्लुकोज ) स्तर दिन भर फरक हुन्छ। तर यदि तपाईंको स्तरहरू स्वस्थ लक्ष्य दायरा (सामान्यतया mg० मिलीग्राम / डीएल भन्दा कम) भन्दा तल झर्छ भने यसले असहज र खतरनाक पनि हुन सक्छ।
जबकि हाइपोग्लाइसीमिया सामान्यतया मधुमेह मेलिटससँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ अन्य औषधी र सर्तहरू छन् जसले यसको कारण बनाउँदछ - तर मधुमेह बिना हाइपोग्लाइसीमिया असामान्य छ, अनुसार सतजित भुस्री , MD, न्यूयोर्क शहरमा अपर ईस्ट साइड कार्डियोलोजीको संस्थापक।
मधुमेह रगतमा अत्यधिक चिनी, वा हाइपरग्लाइसेमियाबाट परिभाषित गरिएको छ। Hypoglycemia रगतमा अपर्याप्त चिनीले परिभाषित गरेको छ।
हाइपोग्लाइसीमियाका लक्षणहरू के के हुन्?
रगत चिनी परिवर्तन सबै फरक फरक गर्दछ। यस अनुसार अमेरिकी मधुमेह संघ (ADA), hypoglycemia का केहि सामान्य लक्षणहरु:
शक्ति वा विचित्रता
चिन्ता वा घबराहट
पसिना, चिसो, वा नक्कल
छिटो मुटुको धडकन
अनुहार वा हल्का टाउको
निन्द्रा, कमजोर, वा सुस्त महसुस गर्दै
ओठ वा गालामा झुकाव
गम्भीर हाइपोग्लाइसीमियाको मामिलामा, यी लक्षणहरूले भ्रम, विकृत दृष्टि, चेतना गुमाउने, वा दौरामा निम्त्याउन सक्छ। यदि कोही बाहिर निस्केर जान्छ, वा कम रगतमा चिनीको फेला परेको छ भने, तुरून्त9call ० मा कल गर्नुपर्दछ।
धेरै व्यक्तिहरूले समय समयमा कम रगत चिनीको प्रभाव महसुस गरेका छन् - जब तपाईं वास्तवमै भोकाउनुहुन्छ, वा यदि तपाईं खाली पेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। तर, यदि तपाई हप्तामा धेरै चोटि हाइपोग्लासेमियाका लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले संकेत दिन्छ कि तपाईले चिकित्सा उपचार खोज्नु पर्छ, वर्णन गर्दछ। सोमा मण्डल , एमडी, न्यू जर्सीको बर्कले हाइट्समा समिट मेडिकल ग्रुपमा इन्टर्निस्ट।
मधुमेह बिना मानिसहरूलाई हाइपोग्लाइसीमिया के हुन सक्छ?
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका गैर-डायबेटिक हाइपोग्लाइसीमिया छन्, प्रत्येक बिभिन्न कारणहरूको साथ: प्रतिक्रियाशील र nonreactive।
प्रतिक्रियाशील hypoglycemia सामान्यतया तब हुन्छ जब तपाईंले खाना खाएको केही घण्टा पछि रगतमा ग्लुकोजको मात्रा कम अनुभव गर्नुभयो। यो पछाडि के छ भनेर पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन, तर यो ईन्सुलिनको अधिक उत्पादन हो।
प्रिडियटिस तपाईंको शरीरले ईन्सुलिनको गलत मात्रा उत्पादन गर्दछ। यसले टाइप २ मधुमेह हुने खतराको संकेत दिन सक्छ।
पेट सर्जरी: तपाईंको प्रणाली बाट खाना धेरै चाँडो जान्छ
एन्जाइम कमी: तपाईंको खानालाई विच्छेद गर्ने क्षमतालाई बिगार्नुहोस्
गैर प्रतिक्रियाशील हाइपोग्लाइसीमिया
गैर प्रतिक्रियाशील हाइपोग्लाइसीमिया उपवास hypoglycemia को रूप मा पनि चिनिन्छ, खाना को उपभोग संग सीधा सम्बन्धित छैन। यो कारणले भएको हो:
औषधी, जस्तै क्विनाइन
कलेजो, मिर्गौला, पन्क्रियास, वा एड्रेनल ग्रंथिहरू समावेश गर्ने बिरामीहरू
भोजन विकारहरू, जैसे कि एनोरेक्सिया
यसले सबैले तपाईंको शरीरको इन्सुलिन रिलिज गर्न सक्ने क्षमतालाई असर गर्न सक्छ, जसले रगतमा चिनीको कम स्तर निम्त्याउन सक्छ।
के मधुमेह बिना hypoglycemia निको पार्न सकिन्छ?
गैर मधुमेह हाइपोग्लाइसीमिया निको पार्न सकिन्छ। पहिलो चरण उचित निदान भइरहेको छ। डा। भुसरी भन्छिन्, मधुमेह रोगी र मधुमेह रोगीहरूमा हाइपोग्लाइसीमिया तपाईको रगतमा उपवास शुगरको स्तर जाँच गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ जुन कुनै पनि प्रदायकको कार्यालय वा तत्काल हेरचाह केन्द्रमा हेरचाह परीक्षण केन्द्रको रूपमा गर्न सकिन्छ, डा। भुस्री भन्छन्।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक शारीरिक परीक्षा गर्नेछ, तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य ईतिहासको बारेमा प्रश्नहरू सोध्छ, र अन्य रक्त परीक्षण वा स्क्रीनिंग चलाउन सक्छ। यसले तपाईंलाई उपवास हुँदा (खान नहुने), वा कार्बोहाइड्रेट-भारी खाना खाँदा र केही घण्टामा लक्षणहरू हेर्दा तपाईंको लक्षणहरू रेकर्ड गर्न सोध्नु समावेश गर्न सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंसँग मिश्रित-खाना सहनशीलता परीक्षण पूरा गर्न सक्दछ, जसमा तपाईं कार्बोहाइड्रेटको एक निश्चित मात्रामा उपभोग गर्नुहुन्छ (या त खाना वा पेय पदार्थ मार्फत), त्यसपछि तपाईंको रगतमा चिनीको स्तर निगरानी गर्नुहोस्। यी परीक्षणहरू, एन्डोक्रिनोलजी विशेषज्ञको भ्रमणको साथ अन्तर्निहित कारण पत्ता लगाउन र उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
छोटो अवधिमा, यदि तपाई हाइपोग्लाइसेमिक हुनुहुन्छ भने तपाईले रगत ग्लुकोजलाई सामान्य बनाउँन कदम चाल्न सक्नुहुन्छ चाँडो चिनी खाना जस्तै फलफूलको रस, मह, सोडा, दूध, वा कडा क्यान्डी। लामो अवधिको लागि, तपाईले यो अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्थाको उपचार गर्नुपर्दछ।
के हाइपोग्लाइसीमिया रोक्न सकिन्छ?
हो, hypoglycemia को रोकथाम कदमहरु बाट बचाउन सकिन्छ - तपाईलाई मधुमेह छ वा छैन।
यदि तपाईंसँग मधुमेहको साथ हाइपोग्लाइसीमिया छ भने , यो तपाइँको टाँसीको बारेमा मात्र हो मधुमेह व्यवस्थापन योजना । तपाईको इन्सुलिन वा औषधि सेवन गर्नु अघि डबल जाँच गर्नुहोस्, र यदि तपाइँ तपाइँको खाने वा व्यायाम गर्ने बानी बदल्नुहुन्छ भने तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई थाहा दिनुहोस्। यसले तपाईंको ग्लूकोज स्तरलाई असर गर्न सक्छ।
वा, एक निरंतर ग्लूकोज मोनिटर विचार गर्नुहोस् (CGM) यसले रसिन्डरमा रगतमा चिनी सार्छ, र यदि यो एकदम कम खस्केको छ भने तपाईंलाई सचेत गर्दछ। त्यसोभए, तपाईसँग सँधै ग्लूकोज ट्याब्लेट वा हातमा ईन्जेन्टेबल ग्लुकेगन छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं कम रगत चिनीबाट बाहिर निस्कनुभयो र तत्काल उपचारको आवश्यक पर्‍यो भने, तपाईंको साथीहरू वा प्रियजनहरूले एक डोज प्रशासित गर्न सक्दछन्।
यदि तपाईं मधुमेह बिना hypoglycemia छ , आहार र व्यायाम समायोजनले हाइपोग्लाइसीमियाको धेरै एपिसोडहरू रोक्नु पर्छ यदि कुनै अन्तर्निहित अवस्था छैन भने। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बारम्बार साना खाना खाने, फ्याट, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटको विविध आहार खानु वा खाना पछाडि व्यायाम मात्र गर्न सक्छ।
केवल याद राख्नुहोस्, स्नैक्स र डाइट परिवर्तनहरू दीर्घकालीन उपचार हुँदैन यदि यो स्वास्थ्य अवस्था वा औषधिको कारणले हो। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग काम गर्नुहोस् तपाईको hypoglycemia को सहि कारण पत्ता लगाउन र समाधान गर्न।
प्रिस्टिक बनाम एफफेक्सोर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
meloxicam 15 मिलीग्राम ट्याब्लेट को साइड इफेक्ट
किन sudafed काउन्टर पछाडि राखिएको छ
मैले कति भिटामिन डी पूरक लिनु पर्छ?
toenail कवक को लागी सबै भन्दा राम्रो घर उपचार के हो
के तपाइँ ट्यूम्स र पेप्टो बिस्मोल लिन सक्नुहुन्छ